Kukosha kwehutano hwepamoyo muvana | Bezzia
Maria Jose Roldan | 09/07/2021 20:58 | Dzidzisai vana
Vabereki vashoma vanoziva zvechokwadi kuti ungwaru hwemweya hunosanganisira chii. Iyi ficha inoenda isingazivikanwe zvachose ichienzaniswa nekuita kwechikoro uye mamakisi akanaka pakupera kwedzidzo.
Nekudaro, hutano hwepamoyo hwemwana hwakangokosha semhedzisiro yake kuchikoro. Vana vanofanirwa kugadzirira kubva pazera ravo rekutanga, kukwanisa kudzora manzwiro ako uye kuadzora nenzira yakanakisa.
1 Kukosha kwedzidzo yemanzwiro muvana
2 Maitiro ekuvandudza hutano hwepamoyo hwevana
Kukosha kwedzidzo yemanzwiro muvana
Kudzidziswa kwepamhepo hakudzidziswe kuchikoro uye kunodzidziswa pamusoro pemakore, zvinoenderana nehukama hune vana nemhoteredzo yavo. Kuva nedzidzo yakakwana uye yakakwana yemanzwiro inovaita pamusoro pemakore vanhu vanonzwira tsitsi vamwe uye vane nyore kana zvasvika pakukwanisa kutaura.
Pamusoro peizvi, hutano hwakanaka hwepamoyo hwakakosha kana zvasvika pakusimbisa kuzviremekedza uye kuzvivimba. Vana vanokwanisa kutenda mazviri uye nezvavanogona kuwana muhupenyu.
Maitiro ekuvandudza hutano hwepamoyo hwevana
Ipapo isu tichaenda kukupa iwe yakateedzana yenongedzo kana matipi ayo Ivo vanozokubatsira iwe kusimbisa nekusimbisa hutano hwepamoyo hwevana vako:
Izvo zvakakosha kuvaka kwakadaro kwemanzwiro hutano kubva panguva iyo mwana ave nemavhiki mashoma akura. Rudo nerudo rwevabereki kiyi kuitira kuti chisungo chemubatanidzwa chive chidiki kana kusimba zvishoma. Chiito chakareruka chekumutarisa kana kumubata muviri wake wese, zvakakosha mukuumba kungwara kwepamoyo.
Mukati mehutano hwepamoyo, kukwanisa kuzviisa munzvimbo yemwana uye kumuteerera pazvinenge zvichikosha kwakakosha kwazvo. Dambudziko hombe mudzidzo nhasi inyaya yekuti vabereki havateerere vana vavo, izvo zvinoita kuti hutano hwavo hwepfungwa hushome zvakanyanya. Hapana chinoitika kubata vana, tarisa mumaziso avo uye teerera kune zvese zvavanotaura. Izvo zvakakosha kuti vanzwe vakakosha mukati memhuri yemhuri.
Chimwe chiitiko icho vabereki vanofanirwa kufunga nezvacho kana zvasvika kune hungwaru hwepamoyo hwevana vavo inyaya yekuti ivo vanoziva nzira yekuziva yega yega manzwiro uye vanoziva mhedzisiro yavanokonzera mumunhu. Kubva panguva idiki ivo vanofanira kuziva nguva dzese kuti ndeapi manzwiro akakosha mune chero munhu uye akaomesesa. Ivo havagone kufuratira manzwiro senge mufaro kana kusuwa.
Kunze kwekuziva akasiyana manzwiro, zvakakosha kuti ivo vadzidzewo kubva pazera diki kuti vagone kuzviratidza pasina dambudziko. Ivo vanofanirwa kuve nerusununguko rwakakwana kana zvasvika pakukwanisa kuratidza akasiyana manzwiro uye kusave vanozvizvifunga nezvazvo.. Vabereki vanofanira kuremekedza manzwiro aya uye kwete kuseka ivo. Kana vana vachizvinzwa panguva iyoyo, vanofanirwa kutsigirwa kunyangwe iri manzwiro asina kunaka kana akanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Dzidzisai vana » Kukosha kwehutano hwepamoyo muvana
Tsvaga ese makiyi ekuregedzera-uye-kutendeuka windows